यातायात क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरेको छ – Janaubhar
यातायात क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरेको छ
प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २१, २०७१ | 153 Views ||
सुरेश हमाल (उप–महासचिव)
राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिका प्रशासनिक सचिव सुरेश हमाल भर्खरै चितवनमा सम्पन्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको निर्वाचनबाट उप–महासचिव पदमा निर्वाचित भएका छन् । सरकारले यातायात क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको उनी बताउँछन् । राप्ती अञ्चलमा यातायात क्षेत्रको अवस्था, समस्या र समग्र जिल्लाको व्यवसायिक सम्भावनालगायतका विषयमा केन्द्रित भएर गरिएको संक्षिप्त कुराकानी । –सम्पादक
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको उप–महासचिव पदमा निर्वाचिन हुनुभएको छ, यस क्षेत्रको विकासका लागि के गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले मलाई अमूल्य मत दिएर उप–महासचिव पदमा निर्वाचित गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । अबको हाम्रो एजेण्डा भनेको यातायात क्षेत्रको विकास, संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नु हो । सबैभन्दा पहिले हामी बिमा नीतिलाई व्यवस्थित गर्न पहल थाल्नेछौं । गाडी आयातको नीतिलाई वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि महासंघले पहल थाल्नेछ । राप्तीको हकमा पुराना गाडीलाई विस्थापित गरेर नयाँ गाडी सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि राज्यले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । मुलुकभर यातायात व्यवसायीहरुका थुप्रै संस्था छन् । ती सबै संस्थाहरुलाई एकीकृत गर्नु हाम्रो महत्वपूर्ण काम हुनेछ ।
दसैं तिहारको अबधिमा राप्ती अञ्चलमा यातायात आगमन सहज बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
भदौ २५ गतेदेखि नै राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिले अग्रिम बुकिङ शुरु गरिसकेको छ । चाडपर्वमा यातायात सहज होस् भनेर हामीले गाडी थप्ने तयारी गरिरहेका छौं । समितिमा अहिले १ सय ५० ओटा गाडी छन् । दैनिक १६ वटा गाडी काठमाडौं–दाङ सञ्चालन भइरहेका छन् । हामीले दसैंमा थप १० वटा गाडी सञ्चालन गर्नेछौं । यतिले पनि पुगेन भने आवश्यकताअनुसार गाडी थप गरिनेछ ।
राप्ती अञ्चल यातायात व्यवसायी समितिले अहिले के गर्दैछ ?
समितिको साधारणसभा नजिकिएको छ । सम्भवतः तिहारपछि हामीले समितिको साधारणसभा तथा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछौं । अहिले हामीले २० वर्षभन्दा पुराना गाडीलाई विस्थापित गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेका छौं । यसले गर्दा पुराना गाडीका कारणले हुने दुर्घटना पूर्ण रुपमा रोकिनेछ । बिमालाई व्यवस्थित गरिनेछ । यातायात व्यवसायीहरुलाई दुर्घटनापछि पर्न सक्ने समस्या समाधानका लागि समितिले विशेष पहल थाल्नेछ । अब गाडीधनीहरुले गर्नुपर्ने कागजी कामहरु समितिले आफै गर्नेछ । यसबाट गाडी धनीहरुले झन्झटिलो काम गर्नुपर्दैन ।
मुलुकभर नै समय–समयमा यातायात व्यवसायी समितिहरुबीच विवादका खबरहरु आइरहेका हुन्छन् । आफै मिल्न नसक्ने अनि तपाइँहरुले समग्र यातायात व्यवस्था सुधार गर्नुहुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
हाम्रो व्यवसाय भनेको प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको पेशा हो । हाम्रा कुरा बढी हाइलाइट हुने गर्छन् । हामीभन्दा बढी समस्या भएका धेरै संघ संस्थाहरु पनि छन् । ती क्षेत्रका समस्याहरु बाहिर जनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिने भएकाले खासै चर्चामा आउँदैनन् । तर, हामीले हाम्रा समस्याहरु जो महासंघमा छलफल गरेर व्यवसायी समितिहरुलाई निर्देशन गर्ने गर्छ । ती निर्णय कार्यान्वयन भएको छ । केही ठाउँमा सामान्य समस्या आएका होलान् । हामी बीचमा एकता नभएको भन्ने होइन । महासंघमा करीब तीन सय संस्थाहरु आबद्ध छन् । अहिले कुनै पनि ठाउँमा हाम्रा गतिविधि राम्रोसँग भइरहेका छन् । हामीले तयार गरेका नीति नियमहरु सबै व्यवसायी समितिहरुले कार्यान्वयन गर्नुभएकै छ । हामीकहाँ केही घटना हुन्छन् । तर, हामीले ती समस्याहरु टेबुलमा बसेर समाधान गर्दै आएका छौं । हरेक क्षेत्र वा संस्थामा खराब मान्छेहरु हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो निहित स्वार्थका निम्ति काम गर्छन् । त्यस्ता खराब प्रवृत्तिका मान्छेलाई रोक्नको लागि हामीले विशेष पहल गर्नुपर्नेछ ।
तपाइँ पश्चिम नेपालकै एकजना प्रतिष्ठित व्यवसायी हुनुहुन्छ । यहाँको व्यवसायिक सम्भावना के देख्नुहुन्छ ?
पछिल्लो समयमा पश्चिम नेपालमा थुप्रै यातायातका साधन गुड्न थालेका छन् । अहिले पश्चिम नेपालको सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ । यहाँ विभिन्न ठूला सडक परियोजनाहरु सञ्चालन भएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, सहिद मार्ग, दाङ–सुर्खेत सडक लगायतले गर्दा दाङ पनि विभिन्न जिल्लासँग जोडिएको छ । अहिले यातायात व्यवसाय सञ्चालन गरेर जिविका चलाउन गर्न सकिने अवस्था छ । राप्तीको हकमा रुकुम र रोल्पामा अत्यधिक सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । अब गाउँ–गाउँमा गाडी गुड्ने भएका छन् । दाङमा भने पहिले भएका सडकहरु नै हुन् । अब लोकल रुटमा पनि राम्रो अवस्था छ । कर्णालीसम्म गाडी पुगेको छ । यो क्षेत्रमा यातायातको सम्भावना राम्रो छ ।
पछिल्लो समय दाङमा ठूला लगानीका उद्योगहरु खुल्न थालेका छन् । यसरी लगानीकर्ताहरु दाङमै आकर्षित हुनुको कारण के रहेछ ?
दाङ एशियाकै ठूलो उपत्यका हो । यहाँ धेरै सम्भावना छन् । यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनले नै उद्योगधन्दाहरुलाई आकर्षित गरेको छ । यहाँको पानी, चुनढुंगा, वनजंगल लगायतको सम्पदामा दाङ धनी छ । दाङमा ती सम्भाव्यता धेरै भएका कारण सिमेण्ट उद्योग, बिस्कुट उद्योग, ग्याँस धाराको टुटी बनाउने उद्योग, इटा उद्योगलगायतका ठूला उद्योगहरु खुल्न थालेका हुन् । भविष्यमा मुलुक संघीयतामा गए पनि दाङ संघीयताको पनि केन्द्रबिन्दु बन्न सक्छ ।
राज्यले सवारी साधनलाई विलासिताको साधन मान्दै आएको छ । राज्यको नीति तपाइँहरुलाई कस्तो लागेको छ ?
राज्यले यातायात क्षेत्रलाई हेर्दै दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । चार पांग्रे कार तथा सुविधायुक्त सवारीलाई विलासिताको साधन मान्न सकिन्छ । गाडी चढ्ने हैसियत बनाइसकेकाहरुको लागि विलासिताको साधन हो । तर, सार्वजनिक सवारीका साधनलाई विलासिताको साधन मान्नु निकै गलत कुरा हो । अहिले गरिब मान्छे पनि सार्वजनिक यातायातमा चढ्छ । समग्र रुपमा विलासिताको साधन मान्दा नेपालको यातायात व्यवसाय धराशयमा पुगेको छ । राज्यले तत्काल यातायात नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
यातायात व्यवसायीलाई राज्यले कुन रुपमा हेरेको पाउनुभएको छ ?
नेपालको कुल राजश्वको करीब २४ प्रतिशत अटो क्षेत्रबाट उठिरहेको छ । राज्यले यातायात क्षेत्रमा भने अपेक्षाकृत लगानी गर्न सकेको छैन । अन्य क्षेत्रमा राज्यले थुप्रै लगानी गरेको छ । हामीले आर्थिक वर्षको शुरुमै अग्रीम कर तिर्छौं । यसरी अग्रीम कर तिर्ने अन्य कुनै क्षेत्र छैन होला । राज्यले बजेट विनियोजन गर्ने कुरा त एउटा हो । तर, राज्यले यातायात व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न योजना नै ल्याउन सकेको छैन । आफूले व्यवस्थापन गर्न नसकेर राज्यले हामीलाई दोषी देखाइरहेको छ । राज्यले नै आम जनतालाई हामीप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन प्रेरित गरेको छ । यातायात क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको छ । हामीलाई कहिले श्रम मन्त्रालयसँग जोडिन्छ भने कहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग । यातायातजस्तो यति ठूलो क्षेत्रलाई समेट्नको लागि छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता पर्दछ । २०४९ सालको यातायात नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । सरकारले नीतिगत रुपमै यातायात क्षेत्रको विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
र, अन्त्यमा आम व्यवसायीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीहरुलाई मर्यादित ढंगले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दछु । हामीले आम यात्रुहरुलाई सहज हुनेगरी काम गर्नुपर्छ । यातायात क्षेत्र भनेको पूर्ण नाफामूलक क्षेत्र होइन । यसमा ५० प्रतिशत सेवा र ५० प्रतिशत नाफा हुन्छ । यात्रुहरुलाई सरल भाषाका साथै यात्रा अवधिभर उनीहरुसँग मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्छ ।
Prevमौरीले भित्र्यायो लाखौं रुपैयाँ
Nextनारायणपुर यस क्षेत्रकै आर्थिक केन्द्रविन्दु बन्न सक्छ